Dongguan Sophpower အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ, Ltd မှ
PWM နှင့် FPGA နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ DSP စီးရီးမြင့်ပါဝါ DC ပါဝါ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး၏အားသာချက်များကိုရှိပါတယ်, တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်မားသောပါဝါ, မြင့်မားသောလက်ရှိ, မြင့်မားသောဗို့အား, အနိမ့်ဂယက်ရိုက်ဆူညံသံ, အစာရှောင်ခြင်းယာယီတုံ့ပြန်မှု, တိကျမှုနှင့်မြင့်မားသော resolution. DSP Series သည် output voltage နှင့်လက်ရှိကို 1500V နှင့် 1500A အထိရရှိနိုင်သည်. ၎င်း၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ, DSP စီးရီးသည် EV motor နှင့် compressor အတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်, PV အင်ဗာတာ, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်, အရည်အသွေးမီးလောင်ရာစမ်းသပ်မှု, သို့မဟုတ်စက်ရုံပါဝါ.
AFC Series AC Power Source ကို IGBT / SPWM နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုဖြစ်သော်လည်းစက်ရုံလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော output voltage နှင့် frequency ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်. ဤ AFC Ac ပါဝါရင်းမြစ်သည်အရည်အသွေးမြင့်စင်ကြယ်သောလှိုင်းများကို ၂၀၀၀ ကီလိုဗွီထိအထိထုတ်ပေးသည်, ထက်နည်းသော THD 1% ခံနိုင်ရည်ဝန်မှာ. ထို့အပြင်, နှင့် 0-150V သို့မဟုတ် 0-300V ၏ dual- output ကိုဗို့အားအကွာအဝေးပေးပါသည်(0-600V ကိုရွေးချယ်ပါ), fixed 50 / 60Hz ၏ output ကိုကြိမ်နှုန်း, 45-65ချိန်ညှိ Hz(45-400Hz ကိုရွေးချယ်ပါ). အသုံးပြုသူများကို RS232 ၏စံမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် RS485 ...... မှတဆင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။.
DSP စီးရီး High Power DC Power Supply
AFC300 စီးရီး3အဆင့်မြင့်ပါဝါ AC ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို IGBT / SPWM နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုဖြစ်သော်လည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့် Sine wave ကိုပေးသည် ...
LFC100 စီးရီး Linear AC ပါဝါအရင်းအမြစ်
AFC100S Series AC Power Source ကို IGBT / SPWM နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုဖြစ်သော်လည်းစက်ရုံအမျိုးမျိုးအတွက်အောင်မြင်ရန်သန့်ရှင်း။ စိတ်ချရသော output voltage နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုပေးသည် ...
AFC300 စီးရီး3အဆင့်မြင့်ပါဝါ AC အပါဝါအရင်းအမြစ်
AFC100 စီးရီး AC အပါဝါအရင်းအမြစ်
AFC200 စီးရီး 1 အဆင့်မြင့်ပါဝါ AC အပါဝါအရင်းအမြစ်
LFC300 စီးရီး Linear3Phase AC ပါဝါရင်းမြစ်
AFC1300 စီးရီး 1 အဆင့်3အဆင့် AC အပါဝါအရင်းအမြစ်
Sophpower အီလက်ထရောနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 2006 ပြီးပြည့်စုံပြီးကျယ်ပြန့်စွာ Programmable AC power ရင်းမြစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ရန်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအသုံးချမှုများနှင့်ကိုက်ညီရန် linear AC power source နှင့် high power DC power supply. ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကိုရောင်းချသည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လွတ်လပ်သောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူး, တင်ပို့အားလုံးယူနစ်တကမ္ဘာလုံးထောက်ခံနေကြသည်.
လိပ်စာ:F / 2, Bldg A, စီးတီးစက်မှုဇုန်, Shijie , Dongguan,ဂွမ်ဒေါင်း
လက်ျာဘက်ကူးပါ© Dongguan Sophpower Electronics Co., Ltd မှ